Metro Arızaları, Metrobüs Kazaları İmamoğlu'na Karşı Sinsi Bir Sabotaj Yapılıyor Sanki​ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Metrous မတော်တဆမှုများ Insidious Sabotage ဆန့်ကျင်မှု Imamoglu
15 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, Metro, Metrobus, တူရကီ 0
metro ပျက်ကွက် metrobus မတော်တဆမှုတစ် sneaky ဖျက်ဆီးခြင်းလျှင်အဖြစ် imamogluna
Sözcü ယနေ့ထုတ်ဝေသောဆောင်းပါးရေးသားသူ Can Ataklıက Istanbul ရှိသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။ Istanbul Metropolitan Municipality (IMM) Ekrem amomamoğlu'aသည်ဖျက်ဆီးခြင်းကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုရေးသားခဲ့သည်။
Ataklı၏ခေါင်းစဉ်ဖြင့်ဆောင်းပါးရေးသားခဲ့သည်။ Ummah ကျွန်တော်တို့အပေါ်ပြိုလဲသွားသည်bugünကိုဆောင်းပါး၏သက်ဆိုင်ရာအပိုင်း၌ဖော်ပြထားသည်။
"Ekrem Imamoglu ချက်ချင်းရွေးကောက်တင်မြှောက်မတိုင်မီငါရေးသားခဲ့သည်။
ငါ "ဒါဟာ Imamoglu အုပ်ချုပ်ရေးဆန့်ကျင်ခိုးကြောင်ခိုးဖျက်ဆီးခြင်းသည်ဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်၏။
25 သည်နှစ်ပေါင်းများစွာ Istanbul ကိုလွှမ်းမိုးခဲ့သူများအတွက်အလွန်ခက်ခဲလိမ့်မည်။ Imamoglu ကိုလည်းဖျက်ဆီးရန်ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။ မက်ထရိုကားများမတော်တဆမှုများ၊
ဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုလား၊ ဒါမှမဟုတ်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ပြီးသူတို့ဟာ Imamoglu ကိုအကုန်အကျခံပြီးနေရာတစ်ခုကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေရှိသေးလား။
1: နံနက်ယံ၌ 10၊ 00၊ Yenisahra မက်ထရိုဘူတာသည်ကုန်းဆင်းလျှပ်စစ်လှေကားအလုပ်မလုပ်ပါ
2) Kadikoy ကူးတို့ဆိပ်ကမ်းရှေ့သို့ဆင်းရန်လှေကားထစ်သည် 15: 25 အလုပ်မလုပ်ပါ
3: စောင့်ကြည့်ပါ 15: 45 သည်နောက်တဖန် Yenisahra ဘူတာ၏ထွက်ပေါက်လှေကားများအနက်အရှည်ဆုံးနှင့်အရှည်ဆုံးဖြစ်သည်။
ထို့အပြင် metro ဘူတာများရှိစက်လှေကားတစ်လုံးသို့မဟုတ်နှစ်နာရီသည်နေ့စဉ်နီးပါးအလုပ်မလုပ်ပါ။
Metrobus လိုင်းတွင်ထူးဆန်းသောမတော်တဆမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး 15 ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်များရပ်တန့်သွားလျှင်ပင်လူအများအပြားကိုရပ်တန့်စေနိုင်သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Polatli ဘူတာရုံတစ်ခုနှစ်ပတ်လည်သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ပရိသတ်၌အကြီးအကဲစက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်တပ်ဆင်, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မရရှိနိုင်အမှားအောင် 08 / 01 / 2016 Polatlıဘူတာရုံ၏ကြီးကြပ်မှုအောက်ရှိစက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်တပ်ဆင်မှုအစိတ်အပိုင်းများအားတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လက်ရှိမအောင်မြင်ခြင်းများ။ ရထားလမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုအထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (TCDD) YHT ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန၊
ပုဂ္ဂိုလ်များဆန့်ကျင် YHT လိုင်းအကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့်ရက်များဖြစ်စဉ်များအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည် 13 / 05 / 2016 YHT hatlarında görevli personele terör ve sabotaj olaylarına karşı eğitim verildi :TCDD 2. Bölge Müdürlüğünde verilen eğitime YHT hatlarında görevli 169 personel katıldı. TCDD 2. Bölge Müdürlüğü ve Ankara İl…
izban မှရှင်းလင်းချက်များပျက်ကွက် 07 / 08 / 2012 iaZBAN AŞစီမံခန့်ခွဲမှု၊ AliağaMenderesသည်လိုင်းပေါ်ရှိအမှားအယွင်းများအကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ ကြေညာချက်အရ Ulukent နှင့် Alsancak-Aliağaဆင်ခြေဖုံးစနစ်အားကျွေးမွေးသည့် catenary line ၏ğiğliအကြား 21 +4နှင့် 21 + 4K catenary poles များအကြား, နာရီကို 07.24 ရှိTEDAŞသို့ပေးအပ်ခဲ့သည်။
TCDD ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 160 လေအေးပေးစက်ခရီးသည်တင်ကားများ, ပစ္စည်းများအပါအဝင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်စနစ်ကပျက်ကွက်အေး၏သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်အတွက်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါတယ် 03 / 12 / 2012 TCDD ၀ ယ်ယူမှုသည် TCDD ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့် TCDD ၀ ယ်ယူခြင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်မှုများ၏ပြုပြင်မှု ODD ရရှိနိုင်သည့် 160 AIR CONDITIONER PASSENGER ကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်သောပစ္စည်းများပါ ၀ င်သည့်ကာလရှည်ထိန်းသိမ်းခြင်း။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုံမှန်ပြတ်ရွေ့ကတော့အေး System ကိုစီးပွားရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်၏ Wagon ကို Maintenance ပြုပြင်ခြင်းကိုဝယ်လိမ့်မယ်အတူလိုအပျပစ္စည်းများ၏ပြောင်းလဲခြင်းပါဝငျအဆိုပါလေအေးပေးစက်ခရီးသည် 04 / 12 / 2012 အစားထိုးခံရမည့်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်လေအေးပေးစက်ခရီးသည်တင်လှည်းများကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်း - ရေခဲသေတ္တာစနစ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောချွတ်ယွင်းမှုများပြုပြင်ခြင်းİH
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Polatli ဘူတာရုံတစ်ခုနှစ်ပတ်လည်သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု၏ပရိသတ်၌အကြီးအကဲစက်မှုနှင့်လျှပ်စစ်တပ်ဆင်, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်မရရှိနိုင်အမှားအောင်
ပုဂ္ဂိုလ်များဆန့်ကျင် YHT လိုင်းအကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့်ရက်များဖြစ်စဉ်များအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့သည်
TCDD ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: 160 လေအေးပေးစက်ခရီးသည်တင်ကားများ, ပစ္စည်းများအပါအဝင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်စနစ်ကပျက်ကွက်အေး၏သည် Periodic ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်အလုပ်အတွက်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါတယ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပုံမှန်ပြတ်ရွေ့ကတော့အေး System ကိုစီးပွားရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်၏ Wagon ကို Maintenance ပြုပြင်ခြင်းကိုဝယ်လိမ့်မယ်အတူလိုအပျပစ္စည်းများ၏ပြောင်းလဲခြင်းပါဝငျအဆိုပါလေအေးပေးစက်ခရီးသည်
အဆိုပါလေအေးပေးစက်ခရီးသည်လှည်းကို Maintenance ပြုပြင်ခြင်းပြတ်ရွေ့ကတော့အေး System ကိုစီးပွားရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်မှုနှင့်အတူလိုအပျပစ္စည်းများ၏ပါဝင်သည်ကာလအပိုင်းအခြားလိုက်ပြောင်းလဲမှုကောက်ချက်ချ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Multi-Purpose အလင်းရင်းမြစ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည် (Deray, နှင့်ကားထဲတွင်သွားလာမှုစဉ်အတွင်းယူစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်မအောင်မြင်မှုများအားဖြင့်ဆွဲဆောင်သည့် scuffle အတွက်ကြားဝင်စွက်ဖက်ရန်အလို့ငှာ)
နုကမ်းလှမ်းမှုကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများဂျီအက်စ်အမ်-R ကို Operating Systems ကစီမံကိန်း, ဖြစ်ပွားခဲ့သည်စုဆောင်းခဲ့ချို့ယွင်းချက်များပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးအကြား Eskisehir - ဂျီအက်စ်အမ်-R ကိုစက်ရုံနှင့်တူရကီတူရကီ
ဂျီအက်စ်အမ်-R ကိုစက်ရုံနှင့်တူရကီတူရကီ - ဂျီအက်စ်အမ်-R စနစ်များ Project မှစစ်ဆင်ရေး, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအကြား Eskisehir, နူးညံ့ဖြစ်ပေါ်ချို့ယွင်းချက်များပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဖျက်သိမ်းရေးဖျက်သိမ်းခဲ့သည်